Golaha wasiirrada Jubbaland oo ka hadlay wada shaqeyn la’aanta DF Somaliya iyo maamul goboleedyada +SAWIRRO | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Golaha wasiirrada Jubbaland oo ka hadlay wada shaqeyn la’aanta DF Somaliya iyo...
Golaha wasiirrada Jubbaland oo ka hadlay wada shaqeyn la’aanta DF Somaliya iyo maamul goboleedyada +SAWIRRO
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa maanta shir gugdoomiyay kulanka Golaha Wasiirada, oo looga hadlay qodobo kala duwan.
Ugu horayn Madaxweynaha ayaa ka warbixiyay xaaladda Siyaasadda dalka iyo wada shaqayn la’aanta Dowlada Federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah oo saamayn ku yeeshay arrimaha ammaanka dalka iyo hannaanka doorashooyinka, taas oo illaa hada aan wax horumar ah laga samaynin.
Dhinaca kale, guddiga dakhliga ayaa laga dhageystay warbixin la xiriirta xaalada dhaqaalaha iyo sidii loo dardargelin lahaa, iyadoo Madaxweynuhu uu faray in hannaanka canshuuraha iyo dakhli abuuridda la dardargeliyo sanadkan bilowga ah.
Wasaaradda Xanaanada xoolahana waxaa laga dhageystay warbixin la xiriirta shir lagaga hadlayay hannaanka talaalka xoolaha iyo sidii loogu mari lahaa qaab lagula socdo caafimaadkooda, iyadoo la fulinayo dhamnaan talaalada xoolaha, si caafimaadka xoolaha nool loola socdo.
Golaha wasiirrada Jubbaland oo ka hadlay wada shaqeeyn la'aanta dowladda maamul goboleedyada